ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ဆက်ဆံရေးတွင်တစ်ဦးကောင်းစွာသောတိုက်နေသကဲ့သို့ရှိထိ​​ုကဲ့သို့သောအရာဖြစ်၏?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 22 2020 |4မိဖတ်ပြီးသား
ဆင်ခြေဆက်ဆံရေးကိုအကောင်းမှတ်ယူကြတယ်တောင်မှ, ထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးကောင်းတစ်ဦးရန်ပွဲအဖြစ်အရာကဲ့သို့ရှိ၏? ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်, မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်. စုံတွဲတစ်တွဲတစ်ဦးချင်းစီကတခြားပိုကောင်းသိလာအောင်အဖြစ်တိုက်ပွဲများစိုက်ပျိုးဖို့ဆက်ဆံရေးအထောက်အကူပြု. ကရှောင်လွဲမရနိုင်သည်ကိုတစ်ခုခုဖြစ်ကတည်းက, စုံတွဲများမျှမျှတတစစ်တိုက်ခြင်းငှါအဘယ်သို့သင်ယူဖို့လို.
မျှမျှတတစစ်တိုက်ခြင်းငှါအဘယ်သို့သိထားခြင်းကပိုပြီးအရေးကြီးနေတဲ့တိုကျပှဲကိုပထမဦးဆုံးဌာန၌ထွက်ချိုးဖဲ့အဘယ်ကြောင့် သိ. ထက်, ရှိခြင်းခိုးသေးတိုက်ပွဲတွေလည်းကျိုးနပ်မဟုတ်သည့်တိုင်သော်လည်း. သူတို့ကဆုံးရှုံးရန်အကြောင်းရှိပါသည်တူသောသူတဦးမိတ်ဖက်ခံစားရသည့်အခါအချိန်ကိုယူခြင်းအလွန်အရေးကြီးပါသည်, အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားမရှောင်ကြဉ်ခဲ့ကြနိုင်သောပိုပြီးလေးနက်သောတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်ကတည်းက.
ဖြည့်စွက်ကာ, အခြားမိတ်ဖက်သူတို့ကြားလျက်ရှိသည်သည်ဟုခံစားရစေရန်အရေးကြီးသည်. မီးခြစ်ကြွေးကြော်ကြပါပြီမပြုပါနဲ့, သူတို့ဘာမှမကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ဘယ်တော့မှအဖြစ်, ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲဖြစ်စေသလောက်မက်လောက်စရာ.
သည့်အခါတစ်ဦး၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးရန်ပွဲအတွက်, အမြဲတမ်းချစ်ကြည်စွာတိုက်ပွဲကိုကြိုးစားဖြေရှင်း, အစားထက်အနိုင်ရမှတိုက်ခြင်း. သို့သော်, ဤအမှုကိုအထက်ကပြောသည်လွယ်၏ကတည်​​းက, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်, အရာ, နောက်တော်သို့လိုက်လျှင်, တကယ်တော့ထိုသို့စစ်မတိုက်ရကျိုးနပ်ပါစေနိုင်တယ်.
အမျက်တော် ထွက်. ပြန်ကိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်; အစားသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ဖို့အနှံ့သင့်သောအမျက်တော်ကိုတင်
အမျက်ဒေါသဟာ universal ခံစားချက်ဖြစ်ပါသည်, သောနာကျင်မှုကိုနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြ, ဝမ်းနည်းခြင်း, အရှက်နှင့်ပင်နောင်တ. ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်သို့မဟုတ်လက်ရှိအဖြစ်အပျက်ကဖြစ်စေနိုင်ပါသည်. သို့သော်, လူအများစုကအမျက်ဒေါသနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံကိုမသိကြပါ.
အမျက်ဒေါသတစ်ဦးကိုသိခြင်းအဖြစ်မြင်စေသင့်တယ်, ပြဿနာတစ်ခုအားဖြေရှင်းနည်းတွေနဲ့ချီလာမှတစ်ဦးရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အထောက်အကူပြုသည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု. ထိုကွောငျ့, အမျက်ဒေါသသတိထားရမှာကိုအနည်းငယ်ပိုအလွယ်တကူငြင်းကြ၏အကြောင်းရင်းအဖြစ်အပြင်၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကူညီပေးပါမည်.
ဆင်ခြေသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရဲ့အားနည်းချက်များကိုဆောင်ခဲ့ခြင်းငှါနည်းလမ်းမဟုတ်, လျှို့ဝှက်ချက်များသို့မဟုတ်တောင်မှအတိတ်ချိုးတက်. ဒါဟာအနိမ့်ထိုးနှက်ကြောင်းနှင့်တစ်ဦးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အသားအရေအတွက်ဖြစ်စေလွန်းလုံခြုံမှုကင်းမဲ့ကြောင်းပြသ, ထိုကွောငျ့, မိမိတို့ကိုယ်ကိုပိုကောင်းခံစားရစေရန်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်တိုက်ခိုက်ဖို့ရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရ, ဒါမှမဟုတ်ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်မှအငြင်းအခုံတွေအတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိပြီးသူတစ်ဦးပြောပြထားပါတယ်.
အခြားမိတ်ဖက်ဖို့ ပို. ပင်နာကျင်မှုဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုထိုကဲ့သို့သောသူရဲဘောကြောင်ပြုမူသောအမှုအားလုံးကုန်ကျစရိတ်များမှာကိုရှောင်ရှားသင့်. ယင်းအစားခါးအောက်တွင်တစ်စုံတစ်ဦးကရိုက်ထက်, လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အေးအေးဆေးဆေးသူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏စိတ်ထိခိုက်ဘာလေသင့်ပါသည်. ယခုဤတစ်စုံတစ်ဦးကသူရဲကောင်းတစ်ဦးကိုအဘယ်သို့သောအ.
စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုထုတ်ဖော်မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်, ကြည်ညိုလေးစားမှုကို, ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်မှု, နှင့်ကိုယ်ချင်းစာတရား
အထက်ပါအချက်များနှင့်မဆိုဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်နှင့်အတူတိုက်ပွဲရှိခြင်းဘယ်သူမဆိုညာဘက်ဘာမှကိုလုပ်မ. ဤသည်အလွန်အရေးပါသောစိတ်ခံစားမှုများမှာ, အထူးသဖြင့်ဆက်ဆံရေးသည်လူများအဘို့, ထိုကဲ့သို့သောအတိုင်းဤခံစားချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့စုံတွဲများအမြဲကောင်းတိုက်ပွဲတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသေချာအောင်ကူညီပေးပါမည်.
သူတို့မိတ်ဖက်တရားမျှတတဲ့ကုသခွင့်ရှိကြောင်းကိုသိသောကြောင့် Admiral တဦးရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှနာကျင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမတို့ပါဝင်တယ်. တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူကိုယ်ချင်းစာဖို့, တစ်ဦးနဲ့အခြားသူတစ်ဦး၏ရှုထောင့်ကနေအခြေအနေကိုကြည့်ဖို့ရှိပါတယ်.
အကြီးတွေကမထားပါနဲ့, အော်သံ, နှင့်စော်ကားလိုက်
မည်သူမဆိုစဉ်အမိမိကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်လာသောအခါအမျက်တော် ထွက်. လူအပေါင်းတို့သည်မမှားမှုအရာတို့ကိုကူညီပေမယ့်မပြောနိုင်သည့်အခြေအနေတစ်ရပ်အတွက်ရှာတွေ့ပြီ, သေးသူတို့ကမှားသည်ကိုသိ, ဒါပေမဲ့သူတို့စဉ်းစားရန်လည်းစိတ်ဆိုးကြ? တိုက်ပွဲများအဘယ်သူအားမျှမက, မတရားတိုက်ခိုက်နေအထူးသဖြင့်လာသောအခါ.
အမျက်ဒေါသရန်တုံ့ပြန်ခြင်းမပြုမီသင်၏အချိန်ကိုယူဖို့အရေးကြီးတယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. စကားများပြန်သိမ်းယူကြလိမ့်ဘယ်တော့မှမနိုင်သည်ကိုထုတ် blurted မည်ဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်ပြောဆိုရန်လည်းမြန်ဆန်စွာမရှိကြ, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်. အော်တစ်ဦး၏အဆုတ်ကိုထွက်စိတ်ဆိုးခြင်းစော်ကားခြင်းတစ်ဦး၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးသာရဲ့အသံကို၏ဆုံးရှုံးမှုကိုဦးဆောင်, ကလေးတွေကိုနှင့်ရပ်ကွက်အတွင်း၏ဖြစ်ကောင်းကြွင်းသောအရာနှိုးထ.
တဦးတည်းရဲ့လက်တွဲဖော်နှင့်အတူတိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့အခါ, အနိုင်ရသူဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဘူး, ဤသို့ပြုမှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပဲမှားပေါ်တွင်တဦးတည်းရှိစေခြင်းငှါအဖြစ်. ညာဘက်ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ရုံအရည်အချင်းမပြည့်မီသူများခံစားချက်တွေကိုပြသကိုသွားပြီး, မှားဖြစ်ချင်တယ်ဘယ်တော့မှသူတွေကိုမျိုး.
တိုက်ပွဲအနိုင်ရ၏အသုံးပြုမှုကိုကဘာလဲ, မဟုတ်တဦးတည်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆုံးရှုံးသွား? ထိုသို့ထိုက်သည်? တစ်ခုမှာမိမိတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထိခိုက်မည်မျှကြည့်ရှုရန်ပျက်ကွက်သောရန်ပွဲအနိုင်ရတဲ့အပေါ်ထို့ကြောင့် engrossed မဖြစ်သင့်. ၎င်းသည်အနည်းငယ်သာဆုတ်ခွာနှင့်အခြေအနေအကဲဖြတ်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေအများကြီးကြာ, တသဘောထားကွဲလွဲဖို့လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုကြည့်ရှုရန်.
တိုက်ပွဲသည့်အခါ, အခြားမိတ်ဖက်ဝေဖန်ကြဘူး, ထိုသို့မဖြစ်သောကြောင့်ထိုသို့သူတို့ကိုကူညီစဉ်းစား. တိုက်ပွဲအတွက်စေ့စပ်ဘယ်သူမဆိုပုံမှန်အားဖြင့်အလွန်အမျက်ထွက်တော်မူသည်, ဤအချက်မှာအပ်ပေးတော်မူမည်သည့်ဝေဖန်မှုနာကျင်မှုကိုစီရင်ဖို့ရည်ရွယ်သည်. ဒီဖြစ်ထွန်းမှတစ်ခုတည်းသောအရာသူတို့ခွင့်မလွှတ်နိုင်သောအရာတစ်ခုခုပြုသမျှဖတ်ရင်ဘာမှန်းမသိကြပါပြီတူသောသူတဦးရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ခံစားရစေရန်ဖြစ်သည်.
အားလုံးကပြောပါတယ်, ပြုပြီးနောက်, စစ်မှန်တဲ့အရာတစ်ခုကွင်းကို. တိုက်ပွဲများတရားမျှတတဲ့ကဲ့သို့သောအရာတစုံတခုရှိသည်, ဆက်ဆံရေးသည်လူများအဘို့အလွန်အရေးကြီးအရာဖြစ်၏. တစုံတယောက်ကိုသူတို့တိုက်ပွဲကိုစတင်ရန်ပြုမိပါပြီအခွင့်မသာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏အမှားများမှသင်ယူဖို့ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့အနာဂတ်အတွက်ပိုကောင်းစေတဲ့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်. အကောင်းနဲ့တရားမျှတတဲ့တိုက်ပွဲများကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်နိုင်သောသူကိုဘယ်သူမဆိုဟာအလွန်ရှည်လျားပြီးပျော်ရွှင်ဆက်ဆံရေးဟာပျော်မွေ့ရန်သေချာသည်.